Antsirabe: Mampiantrano ny "Camps Judo 2018"
samedi, 18 août 2018 10:35
Natomboka ny alarobia 15 aogositra 2018 lasa teo ny "Camps Judo 2018", izay handraisan'ny ligy 3 anjara, dia Atsinanana, Analamanga ary i Vakinankaratra, ka ao Vinanikarena Antsirabe II no hanaovana ny hetsika.
Judoka manodidina ny 80 no handray anjara amin'izany raha ny nambaran'Atoa Razafimaharavo Raymond, filohan'ny Ligin'Antsirabe.
Nambaran'i Maitre Manitra, tompomariky ny hetsika fa ho famohazana indray ity taranja ity no tanjon'ny hetsika, izay nalaina tahaka tamin'ny "Camps de Judo", fanaon'ireo kalaza any ivelany any, any Soisa.
Tsy ny taranja Judo ihany no omena ireo atleta ireo raha ny fantatra fa hisy ihany koa ny karazana fizahantany ho fanabeazana ireo mpandray anjara.
Raha ny eto Vakinankaratra moa dia fantatra fa manodidina ny 120 ny mpikatroka ary klioba miisa 3 aloha hatreto no misy, ka isan'ny tombony ho azy ireo ny fandraisana ity hetsika Camps de Judo andiany faharoa ity.